Ahoana ny "fanabeazana" mpanjifa momba ny endrika sary | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba "fanabeazana" mpanjifa momba ny famolavolana sary
Indraindray ny mpamorona sasany dia manompo ny mpanjifany mieritreritra fa efa fantany ny momba ilay endrika; na izany aza ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana, tsy fantatry ny mpanjifa izay lazain'ny mpamorona azy ary matetika io dia miteraka tsy fifankahazoan-kevitra, satria ny firesahana amin'ny mpanjifa dia toy ny hoe zavatra rehetra isan'andro ho azy ny fampahalalana rehetra ary manadino izy fa maharitra 4-5 taona any amin'ny oniversite vao mianatra momba ny endrika sary.
Famintinana, tian'ny mpamorona hahatakatra ny mpanjifany manao ary miaraka amin'izay dia mieritreritra izy ireo fa tsy mahalala na inona na inona momba ny famolavolana, koa eto izahay dia hanome torohevitra maromaro anao hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ka mariho.
Ahoana ny fomba "fanabeazana" ny mpanjifa hahafantatra momba ny endrika sary?
1 Eritrereto fa tsy mahalala na inona na inona momba ny famolavolana ny mpanjifa
2 Ampidiro ny "tontolon'ny" mpanjifanao ary mahazoa fitokisana
3 Fantaro ny tanjon'ny tetikasa
4 Mampianatra ny mpanjifa
Eritrereto fa tsy mahalala na inona na inona momba ny famolavolana ny mpanjifa
Manomboka amin'ny fotoana angatahan'ny mpanjifa ny tetibola, andramo ny manazava ny fanontaniana rehetra hahalalana izay tena tadiavinao. Hadihadio raha izay tena lazain'ny mpanjifa no tian'izy ireo holazaina, ary rehefa azonao ny tanjon'ny mpanjifa dia tonga ny fotoana hahatakarana ny tena momba ilay mpanjifa.
Ampidiro ny "tontolon'ny" mpanjifanao ary mahazoa fitokisana
Matetika ny mpamorona sasany noho ny tsy fandriampahalemana, atombohy aloha ny tetik'asa ny manandrana "manaitra", na izany aza, mazàna dia miteraka tsy fahatokisan-tena ho an'ny mpanjifa izany.
Arakaraka ny ahatakaranao haingana kokoa izay takin'ny mpanjifa, ny tsena misy azy ireo, ny fifaninanany, ny fiteny ampiasainy matetika, sns. haingana ianao dia afaka mahazo ny fitokisany. Amin'izany fomba izany, azonao atao ny manaitaitra azy ary mamporisika azy hianatra izay ilaina amin'ny famolavolana mandritra ny fizotran'ny fikarakarana / famoronana.
Fantaro ny tanjon'ny tetikasa
Matetika ny mpanjifa dia manana hevitra marobe, na izany aza, ary mankasitraka ny heviny amin'ny endrika tetik'asa, mety ho kivy izy ireo na ho lasa faly kokoa, toy ny ny tanjon'ny tetikasa dia misy finiavanaRaha lazaina amin'ny teny hafa, alohan'ny hanombohany azy dia ilaina ny mametraka izay tetikasa hovolavolaina; inona no tanjonao; inona ny références-nao; ny vanim-potoana hanatanterahana azy; ahoana no hanaterana azy; iza no tompon'andraikitra ary mazava ho azy, ny vidiny farany.
Mampianatra ny mpanjifa
Amin'ny maha matihanina azy, ny fanabeazana ny mpanjifa dia andraikitry ny mpamorona, raha toa ka tsy manana adidy hahalala na inona na inona amin'ity tontolo ity ny mpanjifa ary amin'ny fotoana marobe, dia tena tsy mahalala na inona na inona momba ny famolavolana izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba "fanabeazana" mpanjifa momba ny famolavolana sary
Inona no atao hoe famolavolana? Izy io dia zavatra afaka manampy antsika amin'ny fiainantsika
Ahoana ny fomba hanesorana na hametrahana ambadika sary ao amin'ny Photoshop